Blackout MagicalTex ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Blackout MagicalTex စက်ရုံ
ရုံးခန်းအတွက် MagicalTex မိုးလုံလေလုံ ၀ င်းဒိုးသည်မျက်မမြင်များပိတ်ထားသည့်အထည်အလိပ်သည်အရည်အသွေးကောင်းသည်။ ကြာရှည်ခံသည်။ မှိုမရှိ၊ ပိုးလည်းမရှိ။ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအထည်များဖြင့်မွေးစားခြင်း၊ ပြင်သစ် ၀ င်းဒိုးအတွက်သင့်တော်သည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂန္ထဝင်အရောင်မျိုးစုံရှိသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်လှပသော၊ ရက်ရောစွာနှင့်ဇိမ်ကျသောပုံစံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိတ်ထည်များသည်ရေစိုခံ။ မီးဘေးကာကွယ်နိုင်သည်။
MagicalTex အရည်အသွေးမြင့် Gunny မျက်မမြင်အထည်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ ကျနော်တို့အပြိုင်အဆိုင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရှိသည်။ မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ, ငါတို့သည်သင်တို့ထံသို့ပိုမိုမြန်ဆန်ပေးပို့။ ၎င်းကိုသင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင့်အနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသောတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ - Ceiling Installation, Exterior Installation, Side Installation စသည်။ အရည်အသွေးနှင့်အရောင်ကိုစစ်ဆေးရန်အခမဲ့နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
MagicalTex Blackout Roller Blind Fabric သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရေစိုခံ။ မီးဘေးကာကွယ်မှုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သော polyester ပစ္စည်းသည်ကြာရှည်ခံစေနိုင်သည်၊ မှိုမရှိ၊ ပိုးမပါ၊ ပုံပျက်သော၊ ကြာရှည်အသုံးပြုပြီးနောက်လမ်းကြောင်းမရှိ။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်လှပသော၊ ရက်ရောစွာနှင့်ဇိမ်ကျသောပုံစံရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသောတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ - Ceiling Installation, Exterior Installation, Side Installation စသည်။ သင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်သည်ရေစိုခံ။ ရေစိုခံသည်။ ၎င်းသည်အရိပ်ကောင်းသောစွမ်းရည်ရှိပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်။ မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိသော polyester ထည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်များ၏ကြံ့ခိုင်မှုကိုနိုင်လွန်ထက် ၄ ဆပိုမိုမြင့်မားပြီး viscose ထက်အဆ ၂၀ ပိုစေသည်။ ကောင်းမွန်သော elasticity သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုခိုင်ခံ့မြဲမြံစေရန်အတွန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နှင့်ငါတို့ polyester ထည်ပိုမိုမြင့်မားအပူခံနိုင်ရည်နှင့်အပူ insulator တွင်လည်းရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့နမူနာပူဇော်နိုင်ပါတယ်!
MagicalTex Roller Blind Fabric သည် Polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်အထည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်များအတွက်သင့်လျော်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အရည်အသွေးကောင်းပြီးသင့်ဖောက်သည်များ၏နှလုံးသားကိုကူညီနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်သည်ရေစိုခံ။ ရေစိုခံသည်။ ၎င်းသည်အရိပ်ကောင်းသောစွမ်းရည်ရှိပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပြည့်ဝြပီးသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်တလောက်မှတွေ့ရှိနိုင်သည်။ မျိုးစုံ, ဝတ္ထုစတိုင်များ, ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များနှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စားသုံးသူများသို့တိုက်ရိုက်ရောင်းသည်၊ ၎င်းသည်အလယ်အလတ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုချန်လှပ်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကောင်းသောပေးသွင်းဖြစ်နိုင်ယုံကြည်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့နမူနာပူဇော်နိုင်ပါတယ်!
လူကြိုက်များသော Roller Shutter Blackout အထည် ၃၂၀ ဂရမ်
MagicalTex Roller Shutter Blackout အထည်အလိပ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော Polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ လှပပြီးဖက်ရှင်ဆန်တယ် မျက်နှာနှစ်ထပ်မျက်နှာကျက်မှုနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်တစ်ဝက်မှေးမှိန်သွားသည်။ အဆင့်မြင့် ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အတူ, ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစွန်းအပေါ် burr မရှိစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အရည်အသွေးနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မမြင်များသည်ဆူညံသံနည်းသောကြောင့်သင့်အိမ်နှင့်ရုံးကို ပို၍ တိတ်ဆိတ်စေပြီးသင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် MOQ သေးငယ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အများစုအတွက်သိုလှောင်ထားရှိသည်။ မကြာမီသင့်အားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုပြသရန်အရည်အသွေးနှင့်အရောင်ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အတွက်အခမဲ့နမူနာများကိုသင်ပေးနိုင်သည်။
Sunshade မျက်မမြင်များပိတ်ချည်ပိတ်ထည် Polyester
MagicalTex Blackout အထည်ကို Polyester နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်ရန် 200/230/250/300 အမျိုးမျိုးသောအကျယ်ကိုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်၏အလေးချိန်သည်တစ်မီတာလျှင် ၃၁၀ gsm ဖြစ်ပြီးစိတ်ကြိုက်အကျယ်ကိုလုပ်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အတူ, ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစွန်းအပေါ် burr မရှိစေသည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးမျိုးသောအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျောင်း၊ အိမ်နှင့်ရုံးသုံးပစ္စည်းများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း၌ရှိကြ၏။ သူတို့သည်အလွန်တာရှည်ခံပြီးသူတို့၏သက်တမ်းသည် ၁၀ နှစ်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် MOQ နိမ့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အရေအတွက်သည်ကြီးမားသည်ဖြစ်စေ၊ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့် ၂၄ နာရီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်, ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့နမူနာပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
MagicalTex Window ကုလားကာထည် 100% Polyester ကို polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အမြှုပ်အရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တောက်ပသောမီးမွှေးစေရုံသာမကအသွင်အပြင်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးမျိုးသောအရောင်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအကျယ်များရှိသည်။ ငါတို့သည် OEM စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်သည်ရေစိုခံ။ ရေစိုခံသည်။ ၎င်းသည်အရိပ်ကောင်းသောစွမ်းရည်ရှိပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြားတွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်အားလုံးအတွက် ၁၀ နှစ်အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် MOQ သေးငယ်သည်။ သင်မှာထားသည့်အတိုင်းကြီးကြီး၊ မင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုများကိုစီစဉ်ပေးမည်။ သင်၏အမှာစာမှာသေးလွန်းလျှင်စိတ်မပူပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းရဆုံးပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။ အရည်အသွေးနှင့်အရောင်ကိုစစ်ဆေးရန်အခမဲ့နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
Window Shutters မီးခိုးပိတ်ထည် 100
MagicalTex လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်လပ်မှုအ ၀ တ်အထည်ကို Polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ လှပပြီးဖက်ရှင်ဆန်တယ် မျက်နှာနှစ်ထပ်မျက်နှာကျက်မှုနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်တစ်ဝက်မှေးမှိန်သွားသည်။ အဆင့်မြင့် ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အတူ, ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစွန်းအပေါ် burr မရှိစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အရည်အသွေးနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်သည်ရေစိုခံ။ ရေစိုခံသည်။